Ny 'Zo anao ho faty amin'ny COVID-19' dia tsy maintsy azo antoka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny 'Zo anao ho faty amin'ny COVID-19' dia tsy maintsy azo antoka
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny senatera aostraliana Pauline Hanson
Tsy ilaina ny Vaksiny!
Nanamafy hatrany ny senatera aostralianina Hanson fa marina ny azy na dia nilaza aza izy fa efa nandalo fitsapana ilaina ireo vaksinim-bidy efa misy ary mety hitera-doza lavitra kokoa amin'ny fahasalamana raha oharina amin'ny virus.
Fanoherana ny vaksiny fanoherana navoakan'ny senatera Pauline Hanson
Ny senatera Pauline Hanson dia nanambara fa ny vaksinin'ny COVID-19 dia mbola tsy voasedra ara-dalàna.
HE Pauline Hanson dia fantatra amin'ny fanambarana mampiady hevitra momba ny fandaharan'asan-tsindrona. Mpanohana anti-vax izy.
Ny hevitr'i Hanson dia nokendren'ny mpitsabo matihanina ary nesoesoina an-tserasera.
Ny mpitarika ny antoko iray firenena ankavanana australianina, Senator Pauline Hanson, dia nanambara fa ny orinasa sy ny governemanta dia tsy tokony "hanery na hampijaly" ny olona hatao vaksiny ary ny olona dia tsy maintsy manana safidy handavana ny vaksinin'ny COVID-19, na dia matin'ny virus izy ireo.
Amamaky hetsika toy izanyMitohy ihany koa ny any UK sy ny firenena hafa.
"Omeo fotoana ny olona, ​​zahao ny vaksiny… ary raha olona toa ahy tsy mbola nanao vaksinina dia mahazo COVID-19 aho ary maty amin'izany dia io no safidiko," hoy i Hanson.
Nilaza ny loholona fa tsy voasedra tsara ny vaksinin'ny COVID-19, hoy ny senatera fa "tsy hampijalina na atahorana hanana vaksiny izy."
Nanantitrantitra hatrany i Hanson fa marina ny azy na dia nolazaina aza fa efa nisy ny vaksiny efa nandalo ireo fitsapana ilaina ary miteraka risika kely kokoa amin'ny fahasalamana raha oharina amin'ny virus.
I Hanson dia fantatra amin'ny fanaovana fanambarana mampiady hevitra momba ny fandaharam-pitsaboana maharitra. Tamin'ny volana lasa teo, ireo mpamokatra amin'ny fandaharana amin'ny radio malaza Sydney dia nisafidy ny 'handrendrika' ny sasany tamin'ireo teny fanoherana ny vaksiny nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fahatarana 30 segondra.
Ny fanehoan-kevitr'i Hanson dia nokapohin'ireo matihanina amin'ny fahasalamana ary nesoesoana an-tserasera niaraka tamin'ireo mpaneho hevitra nilaza fa tamin'ny alàlan'ny fanaparitahana ireo hafatra fanoherana vaksiny dia nanimba ny fiainan'ny hafa i Hanson. “Adala mampidi-doza”, hoy ny nosoratan'ny olona iray tao amin'ny Internet.
Ny fanaovana vaksiny dia tsy maintsy atao ho an'ny mpiasa antitra rehetra mipetraka any Aostralia manomboka amin'ny 17 septambra. Ny praiminisitra Scott Morrison nanambara androany fa ny governemanta ao amin'ny firenena dia tsy mikasa ny hanao vaksinina lehibe kokoa.
"Fantatsika fa misy famporisihana ao anaty vaksinina," hoy ny PM. “Tsy dia mahazo [virus] ianao, tsy dia marary mafy ary tsy manome izany amin'ny namana.”
Hatreto dia 22.5% ny aostraliana izay mihoatra ny 16 taona no vita vaksiny tanteraka ary 44.2% no nahazo fatra iray farafahakeliny fatra, hoy ny governemanta.
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 32
William R MacPheat hoy:
10 Aogositra 2021 amin'ny 18:49
Mbola tsy voasedra tanteraka ireo vaksiny! Izy ireo dia andrana, fampiasana vonjy maika fotsiny. Tsy nasiana fiheverana ireo fepetra fisorohana hafa izay tsy misy vokany kely na tsy misy vokany, indrindra ny vitamina D3. Tsy misy olona afaka milaza ara-dalàna fa ny voka-dratsy ateraky ny vaksininy dia tsy ratsy toa ny valan'aretina. Raha ny marina dia misy dokotera milaza fa mino izy ireo fa hamono olona betsaka kokoa ireo vaksin ireo amin'ny farany noho ilay virus. Tsy manana fampahalalana maharitra momba ny vaksiny izahay. Mamitaka olona ianao amin'ity tantara ity.